musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » CNN Rudo Rutsva rweSamsung: Uye inobhadhara!
CNN uye Samsung shamwari yemushandirapamwe wepasi rose uchiongorora simba rakanaka retekinoroji
CNN International Commercial (CNNIC) yakabatana neSamsung Electronics (Samsung) muchirongwa chekushambadzira chinoburitsa simba rehunyanzvi hwekugadzira ramangwana riri nani uye kubatsira vanhu kukunda matambudziko kuburikidza nehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji.
Kuburikidza neyakanzi bhaisikopo rakanzi 'Better Tech For All' uye kuwiriraniswa kwemhando nechirongwa chekunyora 'Tech for Good', mushandirapamwe uyu uchabatanidza Samsung nevateereri vepasi rose veCNN kuratidza mashandisiro akaita vanhu tekinoroji yekuzvipa simba ivo nenharaunda dzavanogara.
Better Tech For All', yemhando yemukati yakatevedzana yakagadzirwa neCNNIC's inohwina-mubairo wepasi rose brand studio sika, inotevera dingindira rakafanana rezvitsva zvinoshamisa zvinobvumira vanhu kuti vabudirire uye vakunde matambudziko kuburikidza nehunyanzvi hwekuita. Firimu yekutanga 'Yakasainwa Norudo' ine David Cowan, muturikiri wemutauro wemasaini ari matsi uyo akabatsira zviziviso zvehurumende kubva kuGeorgia kuUnited States uye ave achiturikira matsi kwemakore anoda kusvika makumi matatu. Anoratidza kuti tekinoroji yakaita sei kuti ruzivo ruwanikwe uye nekuvandudza hupenyu hwenharaunda yematsi. Sechikamu chekuzvipira kweCNNIC mukusimbaradza, Gadzira akabatana neAdvertising Association's Ad Net Zero chirongwa uye iyi ifirimu rekutanga Gadzira kugadzirwa kabhoni zvisina kwazvakarerekera uchishandisa Albert carbon Calculator kuderedza kabhoni tsoka. Tarisa izvi kuseri kwezviitiko kuti udzidze zvakawanda nezvekuti zvikwata zvekugadzira pasi rese zvakatungamira sei iri firimu rinokurudzira.
n kuwedzera, 'Tech for Good' series yakatanga kwegore rechipiri rakatevedzana, mukubatana neSamsung. Yakatambirwa neCNN anchor uye mutori wenhau Kristie Lu Stout, mwaka wechipiri we 'Tech for Good' yakatangwa muna Chikunguru gore rino uye ine zvikamu zvina zvemaminitsi makumi matatu zvichiratidzwa kusvika muna Mbudzi paCNN International TV, iine zvimwe zviri padhijitari uye mapuratifomu emagariro, kuongorora kuti tekinoroji iri kubatsira sei vanhu uye nzanga yakakura mune zvese kubva padzidzo kusvika kune inoenderera mberi.
"Inguva dzose iropafadzo kubatana nemutungamiri weindasitiri akaita seSamsung kune inokurudzira muchinjika-platform chirongwa chinoratidza simba rehunyanzvi," akadaro. Rob Bradley, Mutevedzeri weMutungamiriri Mukuru, CNN International Commerce. "Kusimbisa nyaya dzemhando yepamusoro nekushandiswa kweruzivo rwe data uye analytics kunoita kuti pave nemhinduro itsva inozobatanidza mabhureki nevateereri vakakosha pasirese. Tinotarisira kubatana uku kunokurudzira vateereri veCNN kuti vafunge nezveramangwana uye kugadzirisa hupenyu hwevamwe nekugadzira tekinoroji yakanaka. "